Myanmar Youth Media Club - Ringtones Page
PoorBest Ringtones Page
Tuesday, 20 July 2010 20:22	Written by Administrator	Tech Talk	- Tech Talk	TwitterSocButtons v1.4
Cellphone တွေအခုခေတ်ကြီးထဲမှာ လူငယ်တိုင်းလိုလိုအတွက် နေ့စဉ်သုံး မရှိမဖြစ် Electronic Gadget တစ်ခုအနေနဲ့ အရေးပါလာပါတယ်။ Phone တွေ fancy ပိုဖြစ်လာပြီး သုံးလို့ရတဲ့ Function တွေလည်းပိုများလာပါတယ်။ အဲဒီထဲကမှာ Ringtones (ဖုန်းလာရင် မြည်တဲ့အသံ) ကိုအမျိုးမျိုး မရိုးအောင် ပြောင်ပြီးသုံးချင်သူတွေအတွက် ဒီ Page လေးကို လုပ်လိုက်တာပါ။ DJ - Chanlay က ဒီ idea ကိုပေးပြီး ဒီလို Page မျိုးလုပ်ဖြစ်ဖို့ ပြောထားတာကြာပါပြီ။ အခုမှပဲ သေချာအချိန်ပေးပြီး လုပ်ဖြစ်သွားတာပါ။ အင်္ဂလိပ်သီချင်း ringtones တွေက ကိုယ်ရှာရင် ရှာတတ်သလို လွယ်လင့်တကူ ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာသီချင်းတွေက ဒီလိုမျိုးရှာဖို့ဆိုတာ အဆင်မပြေပါဘူး။ ကိုယ်ကိုတိုင်လုပ်မှပဲ ရတာပါ။ လုပ်တတ်သူတွေအတွက် ဘာမှခက်ခဲတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မလုပ်တတ်သူတွေ၊ လုပ်ဖို့ပျင်းနေတဲ့သူတွေအတွက် ကျွန်တော်တို့ MYMC ရဲ့တိုးချဲ့ဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုအနေနဲ့ ဒီRingtones စာမျက်နှာလေးကို လုပ်ထားပြီးတာတွေကော၊ တောင်းဆိုတာတွေကိုပါ တင်ပေးသွားမှာပါ။ နောက်ပိုင်း အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် လုပ်ပုံလုပ်နည်းကိုပါ ဒီစာမျက်နှာမှာပဲ ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။
Ringtones လိုချင်သူတွေအတွက် ဖော်ပြထားတဲ့ Listမှာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Ringtone မရှိရင် option နှစ်ခုပေးပါမယ်။
၁) အောက်မှာ Comment ရေးပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Ringtones ကိုပြောခဲ့လိုရပါတယ်။ (ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Ringtones သီချင်းက ဘယ် Album ကလည်းဆိုတာ သေချာပြောနိုင်ရင် ပိုအဆင်ပြေပါတယ်)
ကို Email ပို့ပြီး မိမိနာမည်နဲ့ လိုချင်တဲ့ Ringtone နာမည်ကို ရေးသား တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ Email ကတဆင့်တောင်းတဲ့ Ringtones တွေကို ဒီစာမျက်နှာမှာပဲ ပြန်လည်ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။ ဒီစာမျက်နှာကို အမြဲတမ်း ပြန်လာဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ သဘောမျိုးပါပဲ။
ဒီမှာတင်ထားတဲ့ Link တွေကို မိမိတို့ စာမျက်နှာတွေမှာ အသုံးပြူမယ်ဆိုရင် MYMC ကို Credit ပေးပါ။
List of Ringtonesအေသင်ချိုဆွေ - လေပြေ | [Download]
စန္ဒီမြင့်လွင် - လာမချုပ်နဲ့ | [Download]
9one feat. အိမ့်ချစ် - ကမ္ဘာငယ်လေး | [Download]
ကောင်းမြတ် - ချစ်ခွင့်ရချင်ပြီ | [Download]
Requested RingtonesTuna - လွမ်းရင်းနဲ့ရူးမှာပါ | [Download]
Bobby Soxer - လက်လက်ကိုထလို့ | [Download]
Snare - လုပ်ချင်အုံး | [Download]
Alex - အရင်လို | [Download]
Aung Hla - အလွမ်းသင့်ပန်းချီ | [Download]
Roll One Feat. Bobby Soxer | [Download]
ChipMunks - ခင်မော်တိုး | [Download]
Bunny Phyo - ဆုတောင်းပေးမဲ့သူ | [Download]
အေသင်ချိုဆွေ - တိုင်တည် | [Download]
မျိုးကြီး - ဘီယာ | [Download]
Content View Hits : 8494509